zakain’ny mpanjifa avokoa | NewsMada
Tena fanalalahana marina ! Rivotra mitsoka ao anatin’ny fanontoloana ny fanalalahana, ny tsena malalaka ka tsy voafetra intsony ny vidin-javatra fa baikoin’ny tolotra sy ny tinady. Niaina tanaty vidin-javatra feran’ny fanjakana ny malagasy tao anatin’ny ampolon-taony maro (1975-1991). Tsy nahomby izany vokatry ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra, banky rompitra ny orinasam-panjakana, tsy azo natao intsony na noferana farany izay vitsy indrindra ny nampiditra mpiasam-panjakana, ary teraka ho azy ny kolikoly amin’ny sehatra rehetra, iaraha-miaina ankehitriny.
Nihamahantra ny Malagasy, nihemotra ny fandrosoana ary tsy misy ny vonjy nomena azy, fa vao mainka izy ireo indray ny mizaka ny vokatry ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra. Tsotra ny antony, ampiharina ny fahalalan’ny tsena, ary tsy misy intsony ny arofanina, tsy misy intsony ny fanampiana ara-bola ho an’ireo orinasam-panjakana zara fa misy toy ny Jirama sy ny Air Madagascar ary ny vidin-tsolika ampiharin’ireo orinasa tsy miankina, nividy ny Solima.
Mazava ny resaka, lazaina fa tsy mitsabaka amin’ny famerana ny vidin-javatra (solika, saram-pitaterana, jiro sy rano) ny fanjakana, hay midika mazava izany fa « ianareo vahoaka entina, mpanjifa » no manonitra ny fatiantoka nozakaina sy naloan’ny fanjakana tany aloha.
Vao manomboka ity ny taona 2018, tsy nisondrotra ny karaman’ny mpiasam- panjakana. Tsy ny mpiasam-panjakana iray ihany koa anefa ny vahoaka malagasy fa samy mpanjifa avokoa ny mpiasa any amin’ny tsy miankina, ny manao asa irery, ny asa tsy manara-penitra, ny tsy an’asa, sns.